အမေစုကဗျာကို လေလံအောင်သွားသူ အကြောင်း မောင်မောင်အေး ထုတ်ဖော်ပြောပြလာပုံ – Zartiman
အမေစုကဗျာကို လေလံအောင်သွားသူ အကြောင်း မောင်မောင်အေး ထုတ်ဖော်ပြောပြလာပုံ
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုလို သမိုင်းတွင်မယ့်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ရပ်ကြီးတခုမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီး ရယ်..လေလံကြေးအများဆုံးရအောင် အဆင့်ဆင့် အပြိုင်လေလံပေးခဲ့ကြတဲ့ လေးစားကျေးဇူးတင်စရာ နေရာသီးသီးမှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး များရယ်.. လေလံအောင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ မိသားစု ရယ်… ကိုယ်တိုင်လေလံဝင်ဆွဲခဲ့ကြသလို အားရပါးရအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ များတယောက်မကျန်ရယ်.. ဒီလေလံပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် အဖက်ဖက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသူတယောက်မကျန်ကို ဒီပို့စ်နဲ့ တရိုတသေ ကျေးဇူးတင် ဦးညွတ်လိုက်ပါတယ်… နေရာအသီးသီးမှ စိတ်စေတနာမှန် သူများနှင့်သာ ဘဝတလျှောက်ကြုံခွင့်ရပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလျက်🙏🏻🙏🏻🙏🏻”ဟု နိုင်ငံကျော် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ မောင်မောင်အေးက သူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားဖော် ပြထားပါသည်။
မောင်မောင်အေးဟာ လူမှု အကျိုးပြု ပရဟိတလုပ်ငန်း တွေမှာလည်း စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ လူသိများ ထင်ရှား တဲ့ မောင် မောင်အေးကတော့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့အများအကျိုး သယ်ပိုးပြီး ဆောင်ရွက်တတ်တာကြောင့် ပ ရိသတ်တွေကချစ်ခင် အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မောင်မောင်အေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဗျာလေလံအောင်သွားသူ၏ အ ကြောင်းကို လည်းသူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။”လေလံပွဲအပြီး နောက်တနေ့မနက်မှာပဲ လေလံ အောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဖုန်းဆက်လာတယ်….။ကိုဗစ်ကာလမို့လို့ရယ်… သူ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်သူ မဟုတ်လို့ အိမ်မှာပဲအေးအေးနေတတ်တာရယ်ကြောင့် အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်တောင်မထွက်ဖြစ်တာ လတော်တော်ကြာနေပေမယ့်။
ကိုမောင်မောင်အေးအနေနဲ့ အစ်ကိုကြီး နဲ့ပွဲတွေမှာဆုံဖူးလို့ သိကျွမ်းဖူးကြပေတဲ့ ယခင်သိထားတာတွေထက်ပိုအတွင်းကျကျ သိထားဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်လို့…. အထူးသဖြင့် ကိုယ်တာဝန်ယူထားရတဲ့ လေလံပွဲမှာ လေလံအောင်သွားတဲ့သူဟာ သူ့လုပ်ငန်းတွေ ခိုင်မာမှုရှိရဲ့လား ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေမှာစိုးလို့ အိမ်ခေါ်ဖိတ်တာပါ တဲ့… ပျော်ရွှင် ဂုဏ်ယူလေးစားစွာနဲ့ ဝမ်းပန်းတသာ သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်….။ခြံထဲရောက်တော့ ချစ်စရာရေကူးကန်ဘေးနားက မြက်ခင်းပြင်ကြီးထဲမှာရော ကွန်ကရစ်အခင်းနေရာတွေမှာပါ ကားတွေအပြည့် နဲ့မို့ ကားတစီးစာနေရာထိုးဖို့ ကိုယ်တိုင် ပါကင်နေရာပြပေးတဲ့ ( ရိုးသားနှိမ့်ချမှုက သင်ယူစရာ ) လေလံအောင်သွားသူနဲ့ စကားတွေ တနာရီလောက်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်….။
( တကယ်တမ်းတော့ သူ့ရဲ့ စီးပွါးရေးအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့မှုတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြောပြနေတာကို အခွန်းတိုင်းမှာ လေ့လာစရာတွေအပြည့်နဲ့ မှတ်သားခွင့် သင်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါ )ခေတ်အဆက်ဆက်စီးပွါးဥစ္စာကို အဖွားခေတ်ကတည်းက ဘယ်လိုတွေရှာ ဖွေခဲ့ရ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် … ရှာထားသမျှ ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံလိုက်ရတာတွေက အစ… လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးများစွာကို တည်ထောင်နိုင်နေတာ အလယ်… မနေ့က လေလံပွဲမှာ မိသားစုအားလုံးဘယ်လိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အထိ စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြုံးရွှင်ပြီးတော့ကို ပြောပြနေခဲ့တာ…“ ကိုယ့်အဖိုးအဖွားခေတ်ကတည်းက မွေးဖွားကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် တာတွေကို လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ မလုပ်လိုက်ရပါလားဆိုတဲ့ နောင်တ မရချင်ဘူး “ တဲ့ …. ။
“ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေမှာ ဘယ်အစိုးရက ပြည်သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေလဲ ဆိုတာရယ်… အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရကို နောက်ကွယ်ကနေ တတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးပေးရင်း နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် အခြေခံကောင်းလေး တွေ ရသွားရင်ကို ကျွန်တော် စိတ်ချမ်းသာပီတိဖြစ်ရမှာပါ “ တဲ့… အိမ်မှာ ပန်းချီကားတွေထောင်ချီနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပစ္စည်းတွေစုဆောင်း ရတာကပဲ သူ့ရဲ့ဝါသနာ တဲ့…။ဒါပေတဲ့ ကလေးတွေက တယောက်မှ အဲ့တာတွေ စိတ်မဝင်စားလို့ သူတို့အတွက် ချန်ထားပေးဖို့တောင် အ ခက်တွေ့နေလို့ ပန်းချီပြပွဲတွေဖိတ်လို့ နောက်ထပ်ပန်းချီကားတွေမြင်ရင် ထပ်ဝယ်မိနေမှာစိုးလို့ စိတ်ကို မနည်းဘရိတ်အုပ်ထားရတယ်… ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲ့ဒီကဗျာကိုကျတော့မှ အမျိုးသမီးရော ကလေးတွေကပါ ( နိုင်ငံခြားမှာဘွဲ့အသီးသီးရပြီးပြန်လာကြသူတွေ )။
အရမ်းကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထား လိုချင်နေခဲ့ကြသလို ဒီလေလံအလှူကနေ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ တထောင့်တနေရာအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာကို နားလည်လက်ခံထားကြတာဗျ… တဲ့ “ မနေ့ညက ဟိုဧည့်ခန်းထဲမှာ မိသားစုအားလုံးစုပြီး လေလံကြေးတွေတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြတာလေ “တဲ့…အားရကျေနပ်စွာ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကိုပြောပြနေတော့တာ….” ကျွန် တော်က အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုပေမယ့် အခုလို လေလံဆွဲဖို့ကိစ္စ ကအစ ဈေးတိုးမြှင့်တိုင်း အိမ်သားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုပါရယူတယ်… ဘယ် တော့မှ ကိုယ့်သဘောတခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူး… နောက်ဆုံးလေလံအောင်သွားပြီလို့ ကြေညာလိုက်ချိန်မှာ သားသမီးတွေနဲ့ ဟေးကနဲ အော်ပြီးလက်ဝါးတွေရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတာ… ပြီးတော့မှ နောက်ထပ်ဖုန်းတကောထပ်ဝင်လာတော့ ခင်ဗျား ။
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာ တော်တော်စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေဖြစ်တယ်…. အခုလို ကိုယ့်စကားကိုယ်တည်ပြီး စည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်… ဒါ့ကြောင့် ဒီလေလံပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ရကျိုးနပ်ခဲ့တာပေါ့ ” ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ ပြောပြတော့ ကိုယ့်မှာ ထိုင်နေတဲ့ခုံနဲ့ တင်ပါးကြားထဲ လေတွေတဝှီးဝှီး တဖြောင်းဖြောင်း ဖြတ်ပြေးနေသလိုတောင်ခံစားနေရရော…. သူပြောပြတာတွေ နားထောင်နေရင်း နာ မည်ကျော်ကြားဖို့ ဆိုတာ သူ့အတွက် အရေးမကြီး.. သူ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ လိုလည်း လုံးဝမလိုအပ်နေတော့တာကို မျက်ဝါးထင်ထင် အ ရှင်းသားကြီးတွေ့နေရတာ…။” ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ပေါ့… အခုလို တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လိုအပ်မယ်ထင်လို့ လှူတာမှာ တခြားအ ခွင့်အရေးတွေပြန်လိုချင်မှတော့ နာမည်ဖော်ပြီးတောင်နေတော့မှာပေါ့… အခုက ဘယ်သူမှကို မသိစေချင်တာလေ ” တဲ့။
အမျိုးသမီး နဲ့ သား သမီးတွေကအစ ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက် တထောင့်တနေရာ ပါဝင်ခွင့်ရနေတယ်လို့သာ စိတ်ထဲခံစားရင်း လေလံပွဲမှာ မိသားစုလိုက်ကို တပျော်တပါးကြီး ပါဝင်ခဲ့ကြတာ… တဲ့ ကျွန်တော့်လောက် မနက်နိုးတိုင်း ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ဘုရားရှိခိုး ဘု ရားတရားတွေလုပ်ဖြစ်လို့ တရားရှိတယ်ထင်ရပေတဲ့ လေလံအောင်သွားတဲ့ညကတော့ ဘယ်လိုမှကို အိပ်မပျော်တာဗျာ တဲ့… ဒီလေလံပွဲမှာ အနိုင်ရလို့ရယ်လည်းမဟုတ်ဘဲ ပွဲအပြီး ပို့စ်တွေ မန့်တွေမှာ ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင် ပျော်နေကြ စိတ်ချမ်းသာ ကြည်နူးဝမ်းသာ နေကြတာတွေကို လိုက်ဖတ်နေရင်းနဲ့ကို ပျော်နေတာ ပျော်နေတာဆိုတာ..လေလံအပြိုင်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လေးစားသလို သူနိုင်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ဖူးပေမယ့်။
တဖက်ကလည်း အမေစု လက်ရေးကဗျာမူရင်းပါလား ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မရ ရအောင်ကို သိမ်းထားချင်စိတ်က တားမရဘူး တဲ့… အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ခင်ဗျား ဘေးကြပ် နံကြပ်ဖြစ်နေရလို့ ကျွန်တော့်နာမည်ဖော်ရတော့မယ်ဆိုလည်း ဘာမှပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး… ဟိုးအ ရင်ကတည်းက အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့သူမို့လို့ ဘယ်ကိစ္စမဆို ဘယ်အလှူမဆို လူရှေ့ထွက်မပြတာဆိုတာရယ် ဒီအလှူငွေတွေ ဘယ်ကနေရတာလဲဆိုတဲ့ စိစစ်စရာတွေများပေါ်လာခဲ့ရင်လည်း အချိန်မရွေးငွေဖြူတွေ ပြပေးမယ်နော် တဲ့… ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ပူလောက်မယ်ထင်တဲ့ သို့လော သို့လောတွေကို ကျောက်စက်ရေအေးလေးတွေနဲ့ တခွက်ချင်း တစက်ချင်း လောင်းချပေးနေတယ်လို့သာ ခံစားနေရတော့တယ်….။
ဒီနေ့မှာတော့ ကဗျာပိုင်ရှင် ကဗျာဆရာ ဒါရိုက်တာ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီး + လေလံအောင်တဲ့သူ + အလှူရန်ပုံငွေလက်ခံပေးသူ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံသာမြင့် ၊ ဦးသိန်းဦးတို့နဲ့ အတူ မင်္ဂလာရှိလွန်းတဲ့ အလှူတော်မင်္ဂလာ အောင်မြင် အထမြောက်ခဲ့ လေပြီ… လေလံအောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်ပြီဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလိုမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့် နာ မည်တော့ မဖော်ပြတော့ပါ…အခုလိုဖက်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။သာယာသော နေ့လေးကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source; Mg Mg Aye’Fb
ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အခုလို သမိုငျးတှငျမယျ့ဂုဏျယူစရာဖွဈရပျကွီးတခုမှာ ပါဝငျခှငျ့ပေးခဲ့တဲ့ ကဗြာဆရာ ဒါရိုကျတာမငျးထငျကိုကိုကွီး ရယျ..လလေံကွေးအမြားဆုံးရအောငျ အဆငျ့ဆငျ့ အပွိုငျလလေံပေးခဲ့ကွတဲ့ လေးစားကြေးဇူးတငျစရာ နရောသီးသီးမှ လုပျငနျးရှငျကွီး မြားရယျ.. လလေံအောငျသှားသောပုဂ်ဂိုလျကွီးနဲ့ မိသားစု ရယျ… ကိုယျတိုငျလလေံဝငျဆှဲခဲ့ကွသလို အားရပါးရအားပေးခဲ့ကွတဲ့ ပွညျသူ မြားတယောကျမကနျြရယျ.. ဒီလလေံပှဲဖွဈမွောကျအောငျမွငျအောငျ အဖကျဖကျက ဝိုငျးဝနျးကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကွသူတယောကျမကနျြကို ဒီပို့ဈနဲ့ တရိုတသေ ကြေးဇူးတငျ ဦးညှတျလိုကျပါတယျ… နရောအသီးသီးမှ စိတျစတေနာမှနျ သူမြားနှငျ့သာ ဘဝတလြှောကျကွုံခှငျ့ရပါစကွေောငျး ဆုတောငျးလကျြ🙏🏻🙏🏻🙏🏻”ဟု နိုငျငံကြျော အစီအစဉျတငျဆကျသူ မောငျမောငျအေးက သူ၏လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါတှငျ ရေးသားဖျော ပွထားပါသညျ။
မောငျမောငျအေးဟာ လူမှု အကြိုးပွု ပရဟိတလုပျငနျး တှမှောလညျး စှမျးစှမျးတမံ ဆောငျရှကျနသေူတဈယောကျပါပဲ။ လူသိမြား ထငျရှား တဲ့ မောငျ မောငျအေးကတော့ အနုပညာရှငျတဈယောကျမဟုတျပမေယျ့ သူ့ရဲ့အမြားအကြိုး သယျပိုးပွီး ဆောငျရှကျတတျတာကွောငျ့ ပ ရိသတျတှကေခဈြခငျ အားပေးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။မောငျမောငျအေးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကဗြာလလေံအောငျသှားသူ၏ အ ကွောငျးကို လညျးသူ၏လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါတှငျယခုလိုဖျောပွထားပါတယျ။”လလေံပှဲအပွီး နောကျတနမေ့နကျမှာပဲ လလေံ အောငျသှားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျကွီးက ဖုနျးဆကျလာတယျ….။ကိုဗဈကာလမို့လို့ရယျ… သူ့ပငျကိုယျစိတျကိုက ပှဲလမျးသဘငျတှေ ကွိုကျနှဈသကျသူ မဟုတျလို့ အိမျမှာပဲအေးအေးနတေတျတာရယျကွောငျ့ အိမျထဲကနေ အိမျပွငျတောငျမထှကျဖွဈတာ လတျောတျောကွာနပေမေယျ့။
ကိုမောငျမောငျအေးအနနေဲ့ အဈကိုကွီး နဲ့ပှဲတှမှောဆုံဖူးလို့ သိကြှမျးဖူးကွပတေဲ့ ယခငျသိထားတာတှထေကျပိုအတှငျးကကြ သိထားဖို့ လိုအပျမယျထငျလို့…. အထူးသဖွငျ့ ကိုယျတာဝနျယူထားရတဲ့ လလေံပှဲမှာ လလေံအောငျသှားတဲ့သူဟာ သူ့လုပျငနျးတှေ ခိုငျမာမှုရှိရဲ့လား ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ စိုးရိမျစိတျတှရှေိနမှောစိုးလို့ အိမျချေါဖိတျတာပါ တဲ့… ပြျောရှငျ ဂုဏျယူလေးစားစှာနဲ့ ဝမျးပနျးတသာ သှားတှဖွေ့ဈခဲ့ပါ တယျ….။ခွံထဲရောကျတော့ ခဈြစရာရကေူးကနျဘေးနားက မွကျခငျးပွငျကွီးထဲမှာရော ကှနျကရဈအခငျးနရောတှမှောပါ ကားတှအေပွညျ့ နဲ့မို့ ကားတစီးစာနရောထိုးဖို့ ကိုယျတိုငျ ပါကငျနရောပွပေးတဲ့ ( ရိုးသားနှိမျ့ခမြှုက သငျယူစရာ ) လလေံအောငျသှားသူနဲ့ စကားတှေ တနာရီလောကျပွောဖွဈခဲ့တယျ….။
( တကယျတမျးတော့ သူ့ရဲ့ စီးပှါးရေးအောငျမွငျစှာဖွတျသနျးခဲ့မှုတှကေို ရငျးရငျးနှီးနှီးနဲ့စိတျရငျးအတိုငျး ပွောပွနတောကို အခှနျးတိုငျးမှာ လလေ့ာစရာတှအေပွညျ့နဲ့ မှတျသားခှငျ့ သငျယူခှငျ့ရခဲ့တာပါ )ခတျေအဆကျဆကျစီးပှါးဥစ်စာကို အဖှားခတျေကတညျးက ဘယျလိုတှရှော ဖှခေဲ့ရ ဖွတျသနျးခဲ့ရတယျ … ရှာထားသမြှ ပွညျသူပိုငျအသိမျးခံလိုကျရတာတှကေ အစ… လကျရှိအောငျမွငျနတေဲ့ လုပျငနျးစုကွီးမြားစှာကို တညျထောငျနိုငျနတော အလယျ… မနကေ့ လလေံပှဲမှာ မိသားစုအားလုံးဘယျလိုပြျောရှငျကွညျနူးခဲ့ကွရတယျဆိုတဲ့အထိ စိတျရငျးအတိုငျး ပွုံးရှငျပွီးတော့ကို ပွောပွနခေဲ့တာ…“ ကိုယျ့အဖိုးအဖှားခတျေကတညျးက မှေးဖှားကွီးပွငျးနထေိုငျခဲ့တဲ့ ဒီတိုငျးပွညျမှာ လုပျသငျ့လုပျထိုကျ တာတှကေို လုပျခှငျ့ရတဲ့အခြိနျမှာ မလုပျလိုကျရပါလားဆိုတဲ့ နောငျတ မရခငျြဘူး “ တဲ့ …. ။
“ ကြှနျတျောတို့ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ တှကွေုံ့ခဲ့ရတဲ့ခတျေအဆကျဆကျအစိုးရတှမှော ဘယျအစိုးရက ပွညျသူတှအေတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျနလေဲ ဆိုတာရယျ… အဲ့ဒီလိုမြိုးအစိုးရကို နောကျကှယျကနေ တတျနိုငျသလောကျပံ့ပိုးပေးရငျး နောကျမြိုးဆကျတှအေတှကျ အခွခေံကောငျးလေး တှေ ရသှားရငျကို ကြှနျတျော စိတျခမျြးသာပီတိဖွဈရမှာပါ “ တဲ့… အိမျမှာ ပနျးခြီကားတှထေောငျခြီနဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ပစ်စညျးတှစေုဆောငျး ရတာကပဲ သူ့ရဲ့ဝါသနာ တဲ့…။ဒါပတေဲ့ ကလေးတှကေ တယောကျမှ အဲ့တာတှေ စိတျမဝငျစားလို့ သူတို့အတှကျ ခနျြထားပေးဖို့တောငျ အ ခကျတှနေ့လေို့ ပနျးခြီပွပှဲတှဖေိတျလို့ နောကျထပျပနျးခြီကားတှမွေငျရငျ ထပျဝယျမိနမှောစိုးလို့ စိတျကို မနညျးဘရိတျအုပျထားရတယျ… ။ ထူးထူးဆနျးဆနျး အဲ့ဒီကဗြာကိုကတြော့မှ အမြိုးသမီးရော ကလေးတှကေပါ ( နိုငျငံခွားမှာဘှဲ့အသီးသီးရပွီးပွနျလာကွသူတှေ )။
အရမျးကိုမွတျမွတျနိုးနိုးတနျဖိုးထား လိုခငျြနခေဲ့ကွသလို ဒီလလေံအလှူကနေ တိုငျးပွညျကောငျးဖို့အတှကျ အထောကျအပံ့ကောငျးတှေ တထောငျ့တနရောအဖွဈပံ့ပိုးပေးနိုငျကွမယျဆိုတာ သသေခြောခြာကို နားလညျလကျခံထားကွတာဗြ… တဲ့ “ မနညေ့က ဟိုဧညျ့ခနျးထဲမှာ မိသားစုအားလုံးစုပွီး လလေံကွေးတှတေိုးမွှငျ့ပေးခဲ့ကွတာလေ “တဲ့…အားရကနြေပျစှာ ပွုံးပွုံးကွီးနဲ့ကိုပွောပွနတေော့တာ….” ကြှနျ တျောက အိမျထောငျဦးစီးဆိုပမေယျ့ အခုလို လလေံဆှဲဖို့ကိစ်စ ကအစ ဈေးတိုးမွှငျ့တိုငျး အိမျသားတှရေဲ့သဘောတူညီမှုပါရယူတယျ… ဘယျ တော့မှ ကိုယျ့သဘောတခုတညျးနဲ့ မဆုံးဖွတျခဲ့ဘူး… နောကျဆုံးလလေံအောငျသှားပွီလို့ ကွညောလိုကျခြိနျမှာ သားသမီးတှနေဲ့ ဟေးကနဲ အျောပွီးလကျဝါးတှရေိုကျဖွဈခဲ့ကွသေးတာ… ပွီးတော့မှ နောကျထပျဖုနျးတကောထပျဝငျလာတော့ ခငျဗြား ။
ဘယျလိုဆုံးဖွတျမလဲဆိုတာ တျောတျောစိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နဖွေဈတယျ…. အခုလို ကိုယျ့စကားကိုယျတညျပွီး စညျးကမျးအတိုငျး ဆောငျရှကျခဲ့တဲ့အပျေါ… ဒါ့ကွောငျ့ ဒီလလေံပှဲမှာ ပါဝငျခဲ့ရကြိုးနပျခဲ့တာပေါ့ ” ဆိုတဲ့အကွောငျးပါ ပွောပွတော့ ကိုယျ့မှာ ထိုငျနတေဲ့ခုံနဲ့ တငျပါးကွားထဲ လတှေတေဝှီးဝှီး တဖွောငျးဖွောငျး ဖွတျပွေးနသေလိုတောငျခံစားနရေရော…. သူပွောပွတာတှေ နားထောငျနရေငျး နာ မညျကြျောကွားဖို့ ဆိုတာ သူ့အတှကျ အရေးမကွီး.. သူ့လကျရှိအနအေထားနဲ့ လိုလညျး လုံးဝမလိုအပျနတေော့တာကို မကျြဝါးထငျထငျ အ ရှငျးသားကွီးတှနေ့ရေတာ…။” ခငျဗြား စဉျးစားကွညျ့ပေါ့… အခုလို တိုငျးပွညျအတှကျ တကယျလိုအပျမယျထငျလို့ လှူတာမှာ တခွားအ ခှငျ့အရေးတှပွေနျလိုခငျြမှတော့ နာမညျဖျောပွီးတောငျနတေော့မှာပေါ့… အခုက ဘယျသူမှကို မသိစခေငျြတာလေ ” တဲ့။
အမြိုးသမီး နဲ့ သား သမီးတှကေအစ ကိုယျနတေဲ့နိုငျငံကောငျးဖို့အတှကျ တထောငျ့တနရော ပါဝငျခှငျ့ရနတေယျလို့သာ စိတျထဲခံစားရငျး လလေံပှဲမှာ မိသားစုလိုကျကို တပြျောတပါးကွီး ပါဝငျခဲ့ကွတာ… တဲ့ ကြှနျတေျာ့လောကျ မနကျနိုးတိုငျး ညအိပျရာဝငျတိုငျး ဘုရားရှိခိုး ဘု ရားတရားတှလေုပျဖွဈလို့ တရားရှိတယျထငျရပတေဲ့ လလေံအောငျသှားတဲ့ညကတော့ ဘယျလိုမှကို အိပျမပြျောတာဗြာ တဲ့… ဒီလလေံပှဲမှာ အနိုငျရလို့ရယျလညျးမဟုတျဘဲ ပှဲအပွီး ပို့ဈတှေ မနျ့တှမှော ပွညျသူတှဘေယျလောကျတောငျ ပြျောနကွေ စိတျခမျြးသာ ကွညျနူးဝမျးသာ နကွေတာတှကေို လိုကျဖတျနရေငျးနဲ့ကို ပြျောနတော ပြျောနတောဆိုတာ..လလေံအပွိုငျပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့စိတျဓါတျကိုလညျး လေးစားသလို သူနိုငျခဲ့ရငျလညျး ဘယျတတျနိုငျမလဲလို့ စိတျဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ဖူးပမေယျ့။
တဖကျကလညျး အမစေု လကျရေးကဗြာမူရငျးပါလား ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မရ ရအောငျကို သိမျးထားခငျြစိတျက တားမရဘူး တဲ့… အကွောငျး ကွောငျးကွောငျ့ ခငျဗြား ဘေးကွပျ နံကွပျဖွဈနရေလို့ ကြှနျတေျာ့နာမညျဖျောရတော့မယျဆိုလညျး ဘာမှပွဿနာတော့ မရှိပါဘူး… ဟိုးအ ရငျကတညျးက အေးအေးဆေးဆေးနခေငျြတဲ့သူမို့လို့ ဘယျကိစ်စမဆို ဘယျအလှူမဆို လူရှထှေ့ကျမပွတာဆိုတာရယျ ဒီအလှူငှတှေေ ဘယျကနရေတာလဲဆိုတဲ့ စိစဈစရာတှမြေားပျေါလာခဲ့ရငျလညျး အခြိနျမရှေးငှဖွေူတှေ ပွပေးမယျနျော တဲ့… ကြှနျတေျာ့ရငျထဲမှာ ပူလောကျမယျထငျတဲ့ သို့လော သို့လောတှကေို ကြောကျစကျရအေေးလေးတှနေဲ့ တခှကျခငျြး တစကျခငျြး လောငျးခပြေးနတေယျလို့သာ ခံစားနရေတော့တယျ….။
ဒီနမှေ့ာတော့ ကဗြာပိုငျရှငျ ကဗြာဆရာ ဒါရိုကျတာ ကိုမငျးထငျကိုကိုကွီး + လလေံအောငျတဲ့သူ + အလှူရနျပုံငှလေကျခံပေးသူ အဖှဲ့ခြုပျ ဗဟိုအောငျနိုငျရေးကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျ ဦးဟံသာမွငျ့ ၊ ဦးသိနျးဦးတို့နဲ့ အတူ မင်ျဂလာရှိလှနျးတဲ့ အလှူတျောမင်ျဂလာ အောငျမွငျ အထမွောကျခဲ့ လပွေီ… လလေံအောငျသောပုဂ်ဂိုလျရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ ပုံတှတေငျလိုကျပွီဖွဈသလို သူ့ရဲ့ နာမညျကြျောကွားလိုမှုကငျးတဲ့စိတျဆန်ဒကွောငျ့ နာ မညျတော့ မဖျောပွတော့ပါ…အခုလိုဖကျရှုအားပေးကွတဲ့အတှကျအားလုံးကိုကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ။သာယာသော နလေ့ေးကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ရူးခါသွား ရလောက်အောင် စွဲမက်စရာကောင်းလွန်းနေ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
လန်း တဲ့ ဘာယာ နဲ့ မိမိုက်လွန်း နေတဲ့ စတယ်လာ၏ ပုံရိပ်များ